Ọhụrụ mbipute nke Free Pascal 3.2.0 abata na ndị a bụ mgbanwe ya | Site na Linux
Mgbe afọ ise gachara ebe ọ bụ na e guzobere mbipute 3.0 na ọkwa ọrụ na ụdị ọhụrụ na Septemba 2019, N'ikpeazụ ọhụrụ version nke nchịkọta-ikpo okwu Pascal efu 3.2.0. Versiondị ọhụrụ ahụ na-agbakwunye nnukwu akụkụ nke ọhụụ na mgbanwe na mmejuputa asụsụ Pascal, na ebumnuche iji meziwanye ndakọrịta na Delphi.
E wezụga nke ahụ fix bug fixes na nkwado maka ihe owuwu ọhụrụ na sistemụ gụnyere, dị ka AArch64, Linux, ppc64le, Android x86_64, na ọbụna 16-bit Windows.
1 Banyere Pascal na-akwụghị ụgwọ
1.1 Kedu ihe ọhụrụ na Pascal 3.2 efu?
Banyere Pascal na-akwụghị ụgwọ
Maka ndị na-amaghị, Pascal efu kwesịrị ịma na nke a bụ ọkachamara 32-, 64- na 16-bit Pascal compiler.
Emepụtara ya na oghere mepere emepe maka ihe karịrị afọ iri abụọ na asaa site na nnukwu obodo nke ndị mmepe afọ ofufo na-arụsi ọrụ ike, amaara ya maka nkwụsi ike ya, ọsọ ọsọ ya na koodu ngwaahịa dị oke mma.
Nwere ike ịchọta ọtụtụ ụlọ ọrụ nhazi: Intel x86 (tinyere 8086), AMD64, x86-64, PowerPC, PowerPC64, SPARC, ARM, AArch64, MIPS, na ngwa igwe Java.
Sistemụ akwadoro gụnyere Linux, FreeBSD, Haiku, Mac OS X, iOS, iPhoneSimulator, Darwin, DOS (16 na 32 bit), Windows 32, Windows 64, WinCE, OS / 2, MorphOS, Nintendo GBA, Nintendo DS, Nintendo Wii, Android, AIX na AROS. Na mgbakwunye, nkwado maka Motorola 68k ije na-adị na wepụta mmepe.
E wezụga nke ahụ dakọtara na Borland Pascal 7, Delphi, Chee Pascal na Metrowerks Pascal. Na ihe yiri ya, a na-emepe IDE Lazarọs, dabere na Free Pascal compiler na-arụ ọrụ ndị yiri Delphi.
Kedu ihe ọhụrụ na Pascal 3.2 efu?
Dika mmepe nke compiler 3.0 mejuputara rue afo ise, ohuru ohuru a ka akwadoro maka oganihu n’iru. O yikarịrị ka ndị EDI dabere na nchịkọta a (Lazarọs, Code Typhon) ga-enye ngwa ngwa ha njikọta.
Na nke bu eziokwu bu na ihe ndi kachasi nma banyere ihe omuma ohuru a di otutu, dika na-agbakwunye ikike ịmalite usoro dị ike iji syntax ahụ "[…]". Yana nkwado ohuru maka oru, usoro na uzo nke ahụ ejikọtaghị ya na ụdị arụmụka.
Nkwado maka ọkọlọtọ (ndabere) modul namespaces apụtawo. Gbakwunyere onye njide ihe mgbochi C nke yiri usoro enweghị aha na Delphi «.
Ọzọkwa emeputara agbasawanye mmejuputa uzo di omimi, Fanye () arụ ọrụ agbakwunyere iji tinye usoro na ihe ndị dị na ndozi dị ike dị ugbu a, yana Hichapụ () iji wepu usoro na Concat () iji jikọta usoro.
Maka ụdị ndekọ, a na-etinye ndị ọrụ Initialize, Finalize, Detuo, na ndị ọrụ AddRef.
Ọzọkwa, echefula na agbakwunyere nkwado maka nyiwe ọhụụ AArch64 (ARM64), Linux, ppc64le, Android x86_64, na i8086-win16 gbakwunye na nchịkọta.
Na-iburu n'uche ndabara namespaces e kwukwara nkwalite ndị a:
Ọtụtụ mmụba n'ihe metụtara ndozi dị ike (ntinye, nhichapụ, nkwekọrịta, onye mgbakwunye mgbakwunye, ndị na-adịgide adịgide, mbido mgbanwe dị iche iche ozugbo ekwuputara ya, ndị nrụpụta).
Ndọtị $ Push na $ Pop maka ndọtị $ MinEnumSize, $ PackSet na $ PackRecords.
Klaasị threadvar ngalaba na klas na ndekọ ndekọ.
Mmezi na ndọtị nke ụdị ọnụọgụ, ọbụlagodi maka ịme ihe na klaasị.
Ndị ọrụ ọhụụ jikwaa ụdị ndekọ (Initialize, Detuo, AddRef, mechaa).
Mgbatị RTTI na ụdị enyemaka maka ihu ihe.
Ngalaba ohuru: rtl-generics (generics), rtti (experimentally!), ProcessUnicode (Unicode version of TProcess).
Klaasị TRegistry bụ nke kwekọrịtara na Unicode.
Edeghachiri ngwugwu CHM iji kpochapụ chinchi ma melite arụmọrụ.
N'ikpeazụ, ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya Banyere ntọhapụ ọhụrụ a, ị nwere ike ịlele ndepụta zuru ezu nke mgbanwe Na njikọ na-esonụ.
Ọ bụ ezie maka mgbanwe ndị metụtara mmemme ochie ahụ, ị ​​nwere ike ịkpọtụrụ ha njikọ na-esonụ.
Maka ndị nwere mmasị ibudata nsụgharị ọhụrụ nke nchịkọta a, ha nwere ike ime nke a site na ịga na njikọ na-esote ebe ha nwere ike ịchọta nsụgharị dị iche iche nke nchịkọta maka ikpo okwu ọ bụla akwadoro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Mmemme » Versiondị ọhụrụ nke Free Pascal 3.2.0 bịarutere ma ndị a bụ mgbanwe ya
na-efu nke ịbụ ndị katọrọ nkatọ, ọ bụ ihe ihere a totem dị ka pascal chụpụrụ site, yuck, java ..
+10 Ahụtụbeghị m ezi uche kpatara e ji kee Java. Ma ajụkwala nkatọ ahụ, ị ​​nwere ike ịkwado ma ọ bụ megide ya, anyị ga-ezobe maka echiche anyị.
Enwetụbeghị m ya. Ọ bụ mkparịta ụka mụ na ndị ọrụ ibe m nwere kemgbe ihe karịrị afọ iri atọ, kedu ihe C na-enye na Pascal anaghị enye? Anaghịdị m ekwu maka java
Ihe niile bụ ahịa dị ọcha, Microsoft 30 afọ gara aga kpebiri iji monopolize compiler ụwa, na n'etiti VB na VC wakporo ike. Anaghịdị m ekwu maka Java….
Enwere ikike, Pascal mepụtara afọ 50 gara aga echiche nke PVM (Pascal Virtual machine) nke agbahapụ maka ihe kpatara arụmọrụ, ma ugbu a JVM rere dị ka ihe asatọ nke ụwa ……. N'ikpeazụ, m kwuru banyere Java… ..
Zaghachi na MANUEL ANGEL GUTIERREZ MONTES